Olona 9 naratra tamin'ny fanafihan'ny mpampihorohoro tany akaikin'ny hotely tao afovoan-tanànan'i Tunis
Home » Fampihorohoroana sy heloka bevava ho an'ny mpandeha: » Olona 9 naratra tamin'ny fanafihan'ny mpampihorohoro tany akaikin'ny hotely tao afovoan-tanànan'i Tunis
Oktobra 29, 2018
Vehivavy iray no nanapoaka tena tamin'ny fanafihan'ny mpampihorohoro tany an-drenivohitr'i Tonizia, voalaza fa nandratra polisy valo. Hita nihazakazaka namonjy ny ainy ny olona taorian'ny nipoahan'ny baomba teo amin'ny arabe feno olona iray.
Tany amin'ny làlambe Habib Bourguiba, Tunis afovoany, no nisy ny fipoahana, teo akaikin'ny Teatra Kaomininaly.
Nilaza ny vavolombelona Mohamed Ekbal bin Rajib fa "teo alohan'ny teatra izy ary nandre fipoahana goavambe ary nahita olona nitsoaka," dia heno koa ireo mpamonjy voina maika faingana ho eny an-toerana.
Fiara mpamonjy voina marobe sy polisy maro no efa eo an-toerana, satria ny horonantsary nakarina tao amin'ny media sosialy dia mampiseho ny tompon'andraikitra manadihady ny fatin'ilay vehivavy ary manandrana mifehy ny vahoaka marobe mikorontana.
Nohamafisin'ny mpitondra tenin'ny minisiteran'ny Atitany Sufian al-Zaq fa polisy valo sy olom-pirenena iray no naratra vokatr'ilay fipoahana, hoy ny tatitra nataon'ny gazety Arabo Al Chourouk. Teo akaikin'ny fiaran'ny polisy sy teo akaikin'ny hotely no nitrangan'ny fanapoahana baomba.
Manomboka manaiky ny fandoavam-bola UnionPay avy amin'ireo mpizahatany sinoa ireo taksibe aostralianina
Ireo mpandahateny dia vita ho an'ny Travel Forward